स्मार्ट ड्राइभिङ लाइसेन्समा देखियो यस्तो चमत्कार, अब के होला ? – Jaljala Online
Posted on May 10, 2019 May 10, 2019 Author Jaljala Online	Comment(0)
बैशाख २७, काठमाण्डाै । बझाङका उमेश केसीले मोटरसाइकल चलाउने लाइसेन्स लिन परीक्षा दिएको आठ महिना भैसक्यो । तर उहाँले अझै लाइसेन्स पाउन सक्नुभएको छैन । परीक्षा पास भएपछि स्मार्ट लाइसेन्स पाइन्छ भनिए पनि त्यसको टुंगो छैन ।
यो खबर बेदानन्द जाेशीले उज्यालो अनलाइनमा लेखेका छन् । उहाँसँग लाइसेन्स पास गरेपछि दिएको एउटा रसिद छ । त्यो रसिदमा भएका अक्षरहरु पनि मेटिएर नदेखिने हुन थालेका छन् । ‘केही समय पहिले यातायात कार्यालयमा फोन गरेर बुझ्दा छापिएपछि म्यासेज आउँछ भनेर भन्यो, तर आएन’ उहाँले दुखेसो पोख्नुभयो ।
उहाँ मात्र होइन, लाइसेन्स परीक्षा उत्तीर्ण भएका ६ लाख जनाले स्मार्ट लाइसेन्स पाउन सकेका छैनन् ।
बाढी पहिरोले यी सडक अवरुद्ध, यात्रा गर्दा सचेत हुनुस्, कहाँ-कहाँ छन् अवरुद्ध [सुचीसहित]
Posted on July 15, 2019 Author Jaljala Online
असार ३०, काठमाडौं । बाढी पहिरोका कारण धेरैवटा राजमार्ग र सडकहरु अवरुद्ध बनेका छन् । केहि राजमार्ग र सडकलाई प्रहरीले खुलाएपनि पहिरो र बाढी बढ्दा केही राजमार्ग र सडकखण्डको अवरोध यथावत रहेको प्रहरीले जनाएको छ । कहाँ कहाँको बाटो अवरुद्ध ? प्रहरीका अनुसार मुस्ताङ, मनाङ, ओखलढुंगा, ललितपुर, मकवानपुर, सिन्धुली रामेछाप लगायतका जिल्लाका केही सडक खण्ड […]
जेठ ६, काठमाडौं । बालुवाटारको ११३ रोपनी सार्वजनिक जग्गा भू-माफियाको खेलले व्यक्तिगत भएपछि खारेजीको माग गर्दै दायर भएको मुद्दा उच्च अदालत पाटनमा सुनुवाई सुरु भएको छ। काठमाडौं जिल्ला अदालतले भू-माफियाको पक्षमा फैसला सुनाएपछि अधिवक्ता दिपकराज जोशी उच्च अदालत पाटन पुगेका थिए। जिल्ला अदालतको दुषित निर्णय एवं लिखत बदर हुनुपर्ने माग गर्दै जोशीले चैत ८ गते […]
लोकसेवा राेकेर ‘तोकसेवा’
काठमाडौं । लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहमा ९ हजार एक सय ६१ कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया सुरु गरेपछि संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले गत शुक्रवार (२४ गते) सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितलाई छलफलका लागि बोलायो। यो खबर नरेन्द्र साउदले अन्नपूर्ण पोष्टमा लेखेका छन् । समिति सभापति शशि श्रेष्ठले अघिल्लै दिन (२३ गते) मन्त्री पण्डितसँग लोकसेवा विज्ञापनबारे छलफल गर्नुपर्ने प्रस्ताव […]